Sheekh Aadan Siiro Oo Walaac Ka Muujiyey Qaabka Xukuumaddu Hantidii Umadda Ugu Adeegsanayso Kala Fogaynta Iyo Isku Dirka Beelaha JSL | FooreNews
Home wararka Sheekh Aadan Siiro Oo Walaac Ka Muujiyey Qaabka Xukuumaddu Hantidii Umadda Ugu Adeegsanayso Kala Fogaynta Iyo Isku Dirka Beelaha JSL
Sheekh Aadan Siiro Oo Walaac Ka Muujiyey Qaabka Xukuumaddu Hantidii Umadda Ugu Adeegsanayso Kala Fogaynta Iyo Isku Dirka Beelaha JSL
“Xukuumadda Waxaan Leeyahay Waar Umadda Ha Isku Dirina Oo Oo Ka Daaya Qabaa’ilka Aad Hantidii Umadda Ku Kala Qaybinaysaan”
Hargeysa (Foore)- Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray (Sheekh Aadan Siiro) oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland ayaa si adag xukuumadda uga digay in ay umadda ka dayso khilaaf uu sheekhu ku sheegay mid ay umadda reer Somaliland ku kala qaybinayso oo ay naxli ku kala dhigayso taasi oo uu sheekhu ku sheegay mid cawaaqib xumo badan ku yeelanaysa xaaladda siyaasadeed iyo nabad galyo ee qarankan Somaliland oo uu ku sheegay mid u baahan in hareeraha laga taagnaado ee aan la hagar-daamayn.
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud (Aadan Siiro) waxa uu sidan ku sheegay khudbaddii Salaadda Jimce ee uu shalay ka jeediyey Masaajidka caanka ah ee Al Quba ee xaafadda Xawaadle, Degmada 26-ka Juun ee caasimadda Hargeysa oo uu sheekhu inta badan ku soo qaato khudbadihiisa salaadda Jimce hadba wacyiga taagan iyo sidii umadda loogu baraarujin lahaa halka dantooda iyo maslaxadda caamka ahi ku jirto.
Khudbaddii Shalay ee Salaadda Jimce waxa uu Sheekh Aadan Siiro si cad ugu faahfaahiyey sida shareecada islaamku u xoogaysay iyo meeqaamka ay dhigtay isku haynta umadda iyo baahida loo qabo in hadba hogaanka umaddu uu noqdo mid aan umadda kala kaxayn ee maslaxadda caamka ah ka shaqeeya isaga oo sheekhu si weyn u qaadaa dhigay digniino culus oo uu u gudbiyey xukuumadda wakhtigan talada dalka haysa oo uu ku tilmaamay mid shilimaadkii umaddan baahan laga soo ururiyey haddana loogu adeegsanayo sidii naxli iyo kala fogaansho loogu kala dhex abuuri lahaa arrinkaasi oo Sheekh Aadan Siiro ku tilmaamay mid u baahan in laga hor tago oo la iska ilaaliyo si aanu qaranku innooga dumin.
Sheekh Aadan Siiro oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Maamullada aan isku kalsoonayni waxa ay dadka kula dhaqmaan oo ku shaqeeyaan nidaamka loo yaqaano qaybi oo xukun si ay dadku u kala qarsoonaadaan. Xukuumadda waxaannu ugu baaqaynaa oo aannu leenahay waar qabaa’ilka ha qaybinina. Waar lacagta umaddu leedahay reeraha ha isugu dirina. Waxaanleeyahay xukuumadda waar ka daaya odayaasha iyo dadka is jecel iyo dadka isku ehelka ah iyo dadka wax wada wadaaga laakiin aragtida ku kala geddisan in aad hantidda ku qaybisaan. Waar ka daaya in aad tidhaahdaan hebolow hebel u jawaab. Hebelowna hebel u jawaab. Iyada oo ujeedadiinu tahay marxaladdan laga gudbayo oo aanay dadku ku kala tagayn in aad ku qaybisaan. Haddii lacag aad leedihiin ku bixinaysaan oo aad umadda ku kala qaybinaysaan waxba may ahaateen laakiin islaanta bacadkaa la fadhida daasaddaa tamaandhada ah ee adeer shantii subaxnimo soo kallahday ee caruurteedii qaarkeed baahi darteed qaar badaha u galeen ee ducaynaysa salaadda subax kadib ee leh Ilaahow waxaannu kaa barinay in dalkani nabad ahaado si aannu u shaqaysanno caruurtayadu ay nabad ahaadaan. Islaantaasi shanta boqol ee shilin ee Somaliland ah ee laga qaado haddii adigana go’aankaagu noqoto in aad dadka ku qaybiso oo aad dadka khilaaf dhex galisaan. Dadka waxa xukuma distoorka ay samaysteen, waxyaabaha ay dadku samaysteen ee ay ku nabad galayaan ee sharciyadda ahna kaasay ku kala baxayaan. Axsaabta qaranku waa sharci. Waxa ay sharci ku yihiin dalka gudihiisa. Waxa la yidhi dadku qabaa’il isuma bahaysan karaan. Waxa la yidhi ninkii siyaasad doonayaa xisbiga uu doono ha galo, laakiin wanaag haku galo. Xisbi la leeyahay Somaliland sharci kama aha ma uu jiro, haddii uu jirona dee in dadka loo sheego ayay tahay. Laakiin waxa weeyi sharciyaddaasi lagu heshiiyey in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo muhiim ah. Waar xukuumaddu dadka haak dayso naxliga iyo dhibaatada iyo khilaafka lagu abuurayo. Xukuumadda waxaannu ku waaninaynaa waar umadda khilaafka ka daaya. Ilaahayna siduu khayrku ku jiro ha inna waafajiyo” ayuu khudbaddiisa Sheekhu ku soo gunaanaday.
Previous PostIs-Barbar Dhigga Laba Dhacdo Oo Isku Mid Ah Oo Ay Sameeyeen Maxamed Kaahin Iyo Xirsi Wakhti Labadooduba Wasiirro Ka Ahaayeen Dalka - Keebaa Khiyaameeyey Cabdiraxmaan Tuur iyo Siilaanyo?- Faallo Next Post20 Xaqiiqo Oo Layaab Leh Oo Xiiso Badan Inta Badanna Aanay Dunidu Ka War Hayn Oo La Xidhiidha Waddanka Jarmalka Iyo Dadkiisa